कोरोना (कोभीड–१९) भाइरसले जति आतंकित र त्रसित बनाएको छ , त्यो भन्दा कैयौ गुणा दलाल संसदीय ब्यवस्थाले जनतालाइ भयभित र आतंकित बनाएकोछ ।
कोरोना एक जीवाणु हो । अति सानो रुपमा हुन्छ । यो आफ्नो नियममा चल्दछ । यसले आफ्नो क्षमताका आधारमा प्रभाव पार्ने र स्वरुप पनि निश्चित छ ।
यसले विश्वका अधिकांस रास्ट्रका लाखौ मानिसलाइ मृत्युको मुखमा पुयार्एर नेपालमा पनि देखिएको डबल म्युटेन्ट प्रकृतिको कोरोना भाइरसले लाखौको संख्यामा संक्रमित बनाएर हजारौंको ज्यान लिएकोछ ।
कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जादा यसले जनमानसमा एक प्रकारको भय उत्पन्न भएको छ । दुनियाका धेरै जनसंख्या भएका कम्युनिष्ट मुलुकले सामान्य उपायहरु प्रयोग गरेर अत्यन्त कम क्षेतिमा कोरोनालाइ आफ्नो काबुमा नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन । SMS सामाजिक दुरि (Social distance )कायम गरेर , माक्स (Mask)लगायर र सरसफाइ ( Sanitation) मा विशेष ध्यान दिदा पहिलात कोरोनाको संक्रमित हुनबाट टाडै रहन सकिन्छ ।
यदि कोभिड १९ बाट संक्रमित भैसक्दा पनि समयमै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अनुशासित तरिकाले कार्य गर्दा हामी सुरक्षित रहन सक्छौ तर सरकारले अनेक बिधिको प्रयोग मार्फत उचित ब्यवस्थापन गरि कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संसदीय ब्यवस्थामा अनावश्यक खालका गलत प्रचारबाजीले जनताको मनोबिज्ञानलाई भयभित बनाएर बिरामीको उपचारको नाममा गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरि गलत तरिकाले पैसा कमाउने सुनौलो अवसर निर्माण गरेका छन ।
स्वास्थ्य सेवाको नाममा अकुत सम्पति कमाउदै जनता मारिरहेका छन ।आफुले बनाएको संविधानका पानालाइ सुन्दर बनाउनका लागि केही रमाइला शब्दहरु उल्लेख गरिएका छन । जस्ले जनताको आखामा छारो हालेर माफियातन्त्र , लुट्तन्त्र , कालोबजारीतन्त्र ,भ्रष्टाचारतन्त्र जस्ता तमाम तन्त्रै तन्त्रको अँध्यारो कुनामा बसेर राज गरिरहेकाछन ।
अझ कम्युनिष्टको नक्कली मुकुन्डो लगाएर आफुलाइ समाजबादी कम्युनिस्ट भन्न रुचाउछन । हुनेखानेका लागि यो देश स्वर्ग हो तर गरिब दिन दुखिका लागि नर्क अहिलेका शासक र उहिलेका राणा शासनमा खासै भिन्नता पाइदैन ।
Transparency international Nepal को रिपोर्टलाई मान्ने हो भने हाम्रो मुलुक एसियाकै पहिलो नम्बरको भ्रस्ट मुलुकको सूचिमा पर्छ । यो देशमा प्रधानमन्त्री स्वयम् आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र नेताको संरक्षणका लागि मैदानमा उत्रिन्छन । संयुक्त रास्ट्र संघको प्रक्षेपणमा ध्यान दिने हो भने यो बर्ष हाम्रो देशको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
UN को अनुमान बमोजिम दक्षिण एशियाको सबै भन्दा खराब अर्थतन्त्र नेपालको हो । केपि ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आ. ब. बजेट प्रस्तुत गर्दा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सपना जनतालाई देखाएको थियो । तर अहिलेको आर्थिक बृदिदर १ प्रतिशत पुगे पनि भाग्य मान्नु पर्ने अवस्था छ । मुलुक यस्तो हरि कंगाल भैसक्दा जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न नसकेर , उपचार खर्च नभएर जनता आत्माहत्या गर्न बिवस भैरहदा यो देशका मन्त्री ,प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपति बेखबर छन । यस्तै अवस्था निरन्तर जारी रहे नेपालको करिब आधी जनसंख्या डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
जनताको हालत जति खराब छ नेता र शासकको मति उतिनै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार छ । संसदीय ब्यस्थामा नेपालका नेताहरु कहिले कसैले कुनै देशमा पनि नगरेको राजनीति गरिरहेका छन । राजनीति भनेको देश बदल्ने माध्यम हो भनेर बुेझेका नेताले देश त बदलिदिए तर आशालाइ निरासामा , अन्यायलाई अत्याचारमा ,कमिसन खोरिलाइ नीतिगत भ्रष्टाचारमा बदलिदिए , लाख दशलाखमा हुने भ्रष्टाचारलाई एकै पटक सतरी करोडमा बदलिदिए अन्यमा हाम्रो देश बहु जातिय ,बहु भाषिक र बहु साँस्कृति एवम प्राकृतिक सुन्दरता तथा श्रोत साधनले भरिपुर्ण देश हो । नेपाली जनताको जीवन शैली दुख कष्ट का साथै हासो खुसी र सहयोगी मनहरुले मिलेर रहेको मुलुक हो ।
यो देशमा विभिन्न शासन प्रणाली ,सत्ता ,नेतृत्वमा परिवर्तन त आए तर नेपाली श्रमजीबी जनताको जीवन शैली बदल्ने कुनै पनि परिवर्तन आएन । अहिलेको समयमा कोरोना महामारी बाट नेपाली जनतालाइ सुरक्षित बनाउन ध्यान दिनुको सट्टा उल्टै आफ्नो कुर्सिको रक्षा गरि सत्ता लम्ब्याउदै इतिहासकै ठुला ठुला रास्ट्रघात र जनघातमा गईरहेको हुदा यो दलाल ब्यवस्थाले नेपाली जनताको मुक्ति भबिष्य दिदैन केही नजिकका आसे पासे बाहेक अरु सम्पुर्ण नेपालीको अहित छन ।
त्यसकारण नेपाली जनताको भाग्य बदल्ने सुनौलो ब्यवस्था एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत बैज्ञानिक समाजवादमा लामबद्ध हुन सबैका लागि बाध्यता भएको छ ।
लेखक ः–दयाराम लुवार
अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी) विशेष जिल्ला